Madaxweyne Farmaajo oo Hadal ku duray wakiilada Beesha Caalamka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweyne Farmaajo oo Hadal ku duray wakiilada Beesha Caalamka
Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa goordhaw Xildhibaanada golaha shacabka u jeediyay Khudbad uu kaga hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka gaar ahaan shirarkii arimaha doorashooyinka.
Farmaajo ayaa khudbada uu u jeediyay Xildhibaanada golaha shacabka waxa uu inta badan uga sheekeeyay marxaladihii ay soo mareen shirarka Dowlada federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ku yeesheen inta badan magaalada Dhuusomareeb.
Madaxweynaha ayaana ku eedeeyay Madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland in caqabad ku noqdeen in heshiis laga gaaro muranka doorashada ka jirta, waxa uuna eeda fashilalka shirarkii socday dusha ka saaray madaxda labadaasi maamul.
Khudabada Madaxweyne Farmaajo ka hor jeediyay Xildhibaanada golaha shacabka ee Baarlamaanka federaalka ayuu ku sheegay in ay jiraan wadamo shisheeye oo faragalin ku haya doorashada Soomaaliya kuwaa uu ka gaabsaday in magacyadooda shaaciyo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa intii uu hadlayay marnaba aan soo hadal qaadin mudo kororsi markii hore la hadal hayay in uu doonayo, waxa uuna inta badan khudbadiisa ku eedeenayay Madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland.
Khudnada Madaxweyne Farmaajo maanta kahor jeediyay Xildhibaanada golaha shacabka ayaan laheyn nuxur sidaas u badan, waxa uuna ka gaabsaday Madaxweynaha ka hadlka arimo badan oo horey loo hadal hayay in uu ka hadli doono.
Previous articleGudoomiye Murusal oo ka soo yeeray war aan ka farxin Madaxweyne Farmaajo
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo Baarlamaanka uga dacwooday Dani iyo Ahmed Madoobe
Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyrre ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar bishii Feb-18-2019. Dorraad ayuu bilaawday dhismaha wadadaan...
Wasaaradda arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi eedayn u jeediyay madaxweyne Joe...
Beesha Caalamka oo maalinta Bari ah kulan la leh Madaxweyne ...
Kooxo Hubeysan oo boob iyo dhac kula dhaqaaqeen xarumo ganacsi...